eHimalaya Online || News from nepal » ४७ बर्षकि मलाइका अरोराले आफ्नो बेडरुमको गोप्य कुरा खोल्दै भनिन, – “यसरी मजा आउछ ।”
४७ बर्षकि मलाइका अरोराले आफ्नो बेडरुमको गोप्य कुरा खोल्दै भनिन, – “यसरी मजा आउछ ।”
२०७८ बैशाख १२ गते आईतबार ०१:२७
४७ बर्षको उमेरमा पनि मलाइका अरोड़ा आफ्नो सुन्दरतले सबैलाई मोहित पार्ने गर्छिन । उनको आफ्नो फिट शरीर र प्रेम जीवन को बारे मा छलफल मा रहन। मलाइकाको पुरानो अन्तर्वार्ता एकदमै भाइरल भइरहेको छ, जसमा उनी खुल्लम खुल्ला उनको सुत्ने कोठाको...
४७ बर्षको उमेरमा पनि मलाइका अरोड़ा आफ्नो सुन्दरतले सबैलाई मोहित पार्ने गर्छिन । उनको आफ्नो फिट शरीर र प्रेम जीवन को बारे मा छलफल मा रहन। मलाइकाको पुरानो अन्तर्वार्ता एकदमै भाइरल भइरहेको छ, जसमा उनी खुल्लम खुल्ला उनको सुत्ने कोठाको रहस्यमा चर्चा गर्दैछिन्। उनी खुलेरै मानिसहरूलाई आफ्नो मन पर्ने र मन नपर्ने कुरा पनि भनिरहेछिन्। मलाइकाले उक्त कुरकानीमा के भनिन, हामी तपाईंलाई बताउँछौं।
मलाइका अरोड़ाले नेहा धूपिया च्याट शो मा धेरै शरारती प्रश्नहरूको जवाफ दिईन । मलाइकाले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा पनि बोलेकी थिइन। उनले बताईन कि उनी कसरी स,म्बन्ध वि;च्छेद पछि अगाडि बढिन् ।
नेहाले मलाइकालाई उक्त समयमा कस्तो प्रकारको पुरुष मन पर्छ? भनेर सोधिन् । मलाइकाले भनिन् कि उनलाई दाह्री पालेको र हसिलो पुरुष मन पर्छ भनेकी थिइन ।
यसका साथ मलाइका अरोड़ाले बेडरूमको रहस्यमा कुरा गर्दा यस्ता धेरै कुरा बताई जुन मानिसहरू अचम्म मान्दछन्। नेहाले उनलाई सोधिन, ‘तपाईको मनपर्ने बेड आसन के हो? ” यसमा मलाइकाले भने, ‘म माथी भएको मन पर्छ ।’ यसो भन्दै ती दुवै मुस्कुराउन थाले।
प्रकाशित मिति २०७८ बैशाख १२ गते आईतबार ०१:२७